Izinsuku zenja: kuyini, izici, imvelaphi kanye nemiphumela | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Uma sikhuluma nge-meteorology, kunezinhlobo ezahlukahlukene zezinto ezingenzeka minyaka yonke futhi ezinemvelaphi nezici ezihlukile. Namuhla sizokhuluma nge UCicanula. Leli gama likhulisa izinja futhi ukuba lapho kubonakala sengathi kuphume ukukhishwa "kosuku lwenja olwedlule". Yize izinja zingahlangene nakancane nencazelo ye-heatwave. Izinsuku zezinja ziyisikhathi lapho kushisa kakhulu futhi zibhekisa enkanyezini kaSilvio esiqwini seCanis Maior, okuthi phakathi nalezi zinsuku kukhanye kakhulu esibhakabhakeni.
Kulesi sihloko sizochaza ukuthi yini i-canicula, ukuthi yiziphi izici zayo nemvelaphi yayo.
2 Isikhathi se-Canicula eSpain
3 Amagagasi okushisa kanye ne-canicula
4 Amazinga okushisa aphezulu
Lapho kufika isikhathi sehlobo, iqoqo lezinkanyezi lifinyelela ezingeni eliphakeme kakhulu lezigidigidi esibhakabhakeni. Ukuvela kukaSirius kwenze okhokho bathuthumela njengoba kwakusho ukuthi kuzoshisa kakhulu. Kwakwaziwa njenge-scorcher. Le nkanyezi, njengoba ikhanya kakhulu, bekucatshangwa ukuthi ikhipha ukushisa okukhulu ngokuhlangana nelanga. Kokubili kukhiqize umnikelo wokushisa owenza lezo zinsuku zishise kakhulu unyaka wonke. Namuhla izinsuku ezishisa kakhulu azihambelani nokukhuphuka kukaSirius, okubonakala ekuqaleni kukaSepthemba. Noma kunjalo, i-canicula ingene kakhulu esikweni kangangokuba iyaqhubeka nokusetshenziswa.
Isikhathi se-Canicula eSpain
ICicanula ayilutho oludlula isikhathi esishisa kakhulu ngokwezibalo sonyaka. ESpain sinezinsuku ezishisa kakhulu zonyaka phakathi kukaJulayi 15 no-Agasti 15. Ukuqala kwayo akuhambisani nokuqala kwehlobo ukuphela kwento, kepha kunalokho kuphakathi nendawo. Iqiniso lokuthi lokhu kwenzeka ngale ndlela ikakhulu kungenxa yezici ezintathu. Sizohlaziya ukuthi yiziphi izinto eziyinhloko ezenza ukushisa kwehlobo kungahambisani nehlobo lezinkanyezi:
Kulezi zinsuku ilanga likhanya enyakatho Nenkabazwe ngendlela ebukeka kakhulu kunakuqala. Lokhu kubangela ukuthambekela kwemisebe yelanga kube okuqondile. Ukuthambekela kwemisebe yelanga kuncane kakhulu ebusika, ngakho-ke idlulisa imisebe eminingi kakhulu. Ngemuva kwamasonto ambalwa ngalesi simo, umhlabathi uyashisa futhi uchithe ukushisa. Masingakhohlwa ukuthi uma singeza kulokhu umphumela wesiqhingi oshisayo wamadolobha, angaguquka abe ukushisa okungabekezeleleki.
Ulwandle lunamazinga okushisa aphakeme futhi isenzo salo se-thermoregulatory siqala ukuncipha. Siyazi ukuthi ulwandle luthatha isikhathi eside ukujwayela ukufinyelela emazingeni okushisa omkhathi. Umoya uya ubanda noma ufudumele ngokushesha kunolwandle. Ngakho-ke, kufanele kucatshangwe ukuthi ukuze imisebe yelanga ifudumeze lonke ulwandle, kufanele kudlule isikhathi esanele ngalo.
Emasontweni ambalwa edlule, enamarekhodi aphansi ngaphezulu, ivuselela umoya ngokusebenzisa umoya wasolwandle futhi ngaleso sikhathi hhayi kakhulu.
Amagagasi okushisa kanye ne-canicula
Khumbula ukuthi i-canicula ayifani ne-wave wave. Ngenkathi okokuqala kuyisikhathi esishisayo ngokwezibalo futhi esiwela cishe ezinsukwini ezifanayo minyaka yonke, amaza okushisa anokusatshalaliswa okungaqondakali nokungahleliwe. Kuyiqiniso ukuthi ezikhathini eziningi kuqondana ngesikhathi. Kuyinto evamile ukuthi engezwe esikhathini esishisayo ngokwezibalo kungahle kuhlobene namaza okushisa. Lokhu kushisa kwandisa amazinga okushisa aphakathi nendawo futhi ngokwezibalo kuba yimfudumalo. Ngokwesibonelo, Phakathi kukaJulayi 23 no-25, 1995, ukushisa kwashiya amarekhodi angama-degree angama-46 ezindaweni zokubuka zaseSeville naseCórdoba.. Lawa manani ayamangaza kepha awekho kude kakhulu neziqu ezimbili ezingama-43-44 ezivame ukuba khona kulezi zinsuku. Lezi zinga lokushisa zivame ukubonakala ekucindezelekeni kweGuadalquivir.
Ukuba maphakathi nehlobo kuyinto evamile ukuthi ama-thermometer akhuphuke futhi ande nakakhulu emadolobheni. I-Canicula yaziwa nangokuthi iyisikhathi sesomiso sangaphakathi naphakathi kwehlobo. Imvamisa ihlala cishe izinsuku ezingama-40 futhi yilapho kunamazinga okushisa aphakamisa kakhulu.
Phakathi kwezici esinazo ze-canicula sibona okulandelayo:
Amazinga okushisa angaphezu kwama-37 degrees: La mazinga okushisa angadala izinkinga ezithile zezempilo kubantu abasengozini enkulu. Yize amagagasi okushisa eyingozi kakhulu ukushesha, amagagasi okushisa angaphikelela kakhulu.
Nciphisa imvula: amazinga okushisa aphezulu avimbela ukwenziwa kwamafu emvula ngenxa yokwanda komoya oshisayo nokwehla kwe-gradient ezishisayo yemvelo.
Ukushisa ngokweqile komoya: umoya ushisa kakhulu kangangokuthi uzungeza usuka endaweni ethile uye kwenye ngokushesha okukhulu.
Isibhakabhaka esicace ngokuphelele: kuhlobene nalokhu okungenhla. Amazinga okushisa aphezulu anciphisa ukwakheka kwamafu emvula.
Amazinga okushisa aphezulu
Ku-canicula kuvamile ukuthola amadolobha amaningana eSpain lapho ama-thermometer athinta noma aze adlule ngisho nama-degree angama-40 Okunye ukubikezela kuvame ukuba ngama-degree angama-45, ikakhulukazi uma ungeza umphumela wokushisa okushisayo ngokushisa okugcwele. La mazinga okushisa aphezulu ahambisana nemililo nesomiso. Isomiso yizikhathi ezinzima ezithinta izitshalo nezinsiza zamanzi ngabantu.
Vele, kufanele kukhulunywe ukuthi ukuguquguquka kwesimo sezulu kusiqinisa isimo se-canicula minyaka yonke. Lokho wukuthi, kunamazinga okushisa aphezulu aphakathi nalezi zinsuku ezingama-40 kunalokho okuhlala njalo ku-canicula.
Ezinye zezeluleko ezinikezwa ukulwa nalezi zinsuku zokushisa okukhulu, yilezi ezilandelayo:
Gwema ukuchayeka ngqo elangeni, ikakhulukazi emini, okuyilapho imisebe yelanga inezinga eliphansi lokuthambekela futhi amazinga okushisa ephakeme.
Phuza amanzi ngokuqhubekayo ukugwema ukuphelelwa amandla kwamanzi.
Yidla ukudla okusha
Faka i-sun cream ukugwema ukusha
Sebenzisa izambulela, Izingubo ezikhanyayo nesigqoko sokuzivikela elangeni.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi nge-canicula nezimpawu zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Amagagasi okushisa » UCicanula